ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Hluttaw News ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: January 30, 2018 In: Hluttaw NewsNo Comments
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအချင်းချင်း၊ လွှတ်တော်အချင်းချင်း၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော၊ ပွညျသူ့လှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမွငျ့ ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျောဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား လကျခံတှဆေုံ့
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇနျန၀ါရီလ ၁၉ ရကျ
ပွညျသူ့လှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမွငျ့သညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျောဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယနေ့ မှနျးလှဲ ၂ နာရီခှဲအခြိနျတှငျ နပွေညျတျောရှိ လှတျတျောအဆောကျအအုံ ပွညျသူ့လှတျတျော ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ထိုငျး-မွနျမာ နှဈနျိုငျငံ အစိုးရအခငျြးခငျြး၊ လှတျတျောအခငျြးခငျြး၊ ပွညျသူအခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ ပွညျသူ့လှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌ နှငျ့အတူ ပွညျသူ့လှတျတျော ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးတီခှနျမွတျ နှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျောရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
ကြေညာချက်အမှတ် – ၂/၀၁/၂၀၁၈ ဗဟိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း